Ubomi Emva kokuba 'Ubuso Buso' - URJ Haddy Udliwano-ndlebe - Ukujongana noNxibelelwano
URJ Haddy Uthetha Ubomi Emva 'Ukujongana'
"I-Face Off" yokugqibela uRJ Haddy, ecaleni kunye nomda wakhe obunzulu kwi-"Tim Burton "umngeni - i-concierge enqunywe ngokugqitywa" ngesifuba sabadwebi ". Ngobubele beSyfy neNBCUniversal
Ekuqaleni ukusuka eCharleston, eWest Virginia, "Face Off" Ixesha le-2 eligijimayo uRJ Haddy lafumana indawo yakhe kwi-"Face Off" ngokuwina uMncintiswano wokuChosela abaQhathanisi be-Syfy, okwenziwe ngo-2011 iSan Diego Comic Con. U-Haddy waphumelela kwindawo yakhe kumncintiswano ophilileyo nabanye ababini abaculi kwiingxaki zokuzenzela ezibonisa iitalente zakhe kwi-prosthetics, ukupenda kunye ne-airbrushing. U-Haddy waphumelela, ebiza indawo yakhe kwi-"Face Off" ukulungiselela umzuzu we-2, kunye ne-media ye-35 ephakamileyo yemfundo kunye nemiphumo ekhethekileyo titshala ngokukhawuleza waba ngumthandi ozithandayo kunye nababukeli.
U-Haddy wenza yonke indlela eya ekupheleni, ekugqibeleni aphumelele isikhundla sokugijima emva kweNkcazo yesi-2 i-Rayce Bird, kunye kunye nabadlali abanomdla kunye no-Ian Cromer. Ndineli thuba lokubambisana noHaddy kutshanje, ukubuza malunga nexesha lakhe kwi-Face Off, kwaye wabelana ngeengcinga zakhe malunga namava akhe, kunye nezicwangciso zakhe ngekamva.
U-Angela Mitchell: RJ, ngaba bekukho ifilimu ethile okanye umtsalane weTV owawunceda ekufuneni ukudala ukwakheka kunye nemiphumo njengomsebenzi?
URJ Haddy: Ewe, kukho ezimbini okanye ezintathu ezivela entloko yam ... I-Puppetry-wise, ndayifumelwa yi-Lyle Conway ye-Audrey II ipopu [ yeTitolo leMpahla elincinane ]. Ubulumko-bulumko, ndiyakhumbula izidalwa kunye nomxholo wesicatshulwa seBetlejuice ebesoloko ndikhuthaze kakhulu kum, kodwa enkulu kunazo zonke mna kwakuyi-Joker eyenziwe nguJack Nicholson kwi-Joker eyenziwe nguNick Dudman e-Tim Burton ka-1989. Ndandicinga ngokucokisekileyo ukuba ndicinga ukuba ngaphandle. Njengomntwana, ndiza kujonga le movie, kwaye ndacinga ukuba baxube emacaleni omlomo wakhe kunye nabo bawabuyisela kuloo nto. Ndathetha ngaphambili kwintetho edibeneyo ukuba ndifuna ukwenza loo mlingane IHalloween, kwaye yayiyincinci yam encinci de ndide ndifumene i- latex foam !
U-Angela Mitchell: Ubani obengummangaliso omkhulu, kuwe? Kwaye, kwakunguBrea. Ndacinga ukuba ingxabano yayingenzela ukuba uJerry okanye uAthenya bahambe kuloo ndlela, kunoko.
URJ Haddy: Sonke sihlobo kunye nosapho ngoku. Kodwa ukhuphiswano kunye nomboniso. Ndiyazi ukuba ndiqalise ukukhupha ukhuphiswano kumhla omnye, ndibuza ukuba ngubani oya kushiywa ekupheleni. UJerry wamangaliswa, wamnika amava akhe, kwaye uBeki naye wamangaliswa. Andivumelani nabagwebi ngeveki. Kwakukho enye into engapheliyo ekugqibeleni ihlala, kwaye yile nto eyayiyilisiwe - kungeyena obengcono, kodwa ngaphezulu malunga nokuba ngubani onomhla ombi okanye lowo ongeyonto engazange ihambe nayo.
U-Angela Mitchell: Yayiyiphi inselele oyithandayo? Njengoko ndikhankanyile kwamanye amavavanyeli athi "Face Off", ndandithanda kakhulu iTim Burton Challenge, kwaye ndacinga ukuba indalo yayingummangaliso kulowo. Kwaye ndiyithande i- concierge yakho engathandabuzekiyo kunye naloo mgca we-whimsy ("isifuba sabadwebi!").
Ukujongwa okujonge kwi-design ye-RJ Haddy ye-"Bur Burton", eyamnceda ukuba amthintele kwi "Face Off". Ngobubele beSyfy neNBCUniversal
URJ Haddy: Siyabonga! Ndiza kufuneka ndivume ukuba ngokuqinisekileyo umngeni wam owuthandayo. Kwakhona, ngenxa yenkathazo endiyifumanayo njengento endiyolisayo, ndiyithande kakhulu i-Dinoplasty dinosaur umngeni, kwaye ngenxa yoluhlobo olumnandi lokumisela, umceli-mngeni we-phobia wawumangalisa. Ukuya kwisibhedlele esibuhlungu kwakubangel 'ugqirha kumgqirha wam, uDkt. Xyro - loo ndawo yandinceda ndenza i-backstory efunekayo kuloo mfana.
U-Angela Mitchell: Ndiyithandane nomngeni we-phobia. Ngelo xesha, yintoni eyona mngeni onzima kakhulu kuwe? Ndicinga ukuba umngeni weDinoplasty wawunzima kakhulu (nangona ubukeka bebuhle kakhulu ekugqibeleni), kwaye wamthanda "iVeloci-Rapper ( velociraptor -rapper)".
URJ Haddy: Ndiyathokoza, ndandonwabile ngokwenene umdlalo wam weDinosaur "UVeloci-Rapper" waphuma - kwakuyinto edibeneyo [umzekelo wam u-Landon] kwaye ndididekile kunye, kwaye ndayazi ukuba uya kukunandipha !
Kodwa, ubunzima kunokuba bekude ngowokugqibela ... Ndabhalwa ngeso sihlandlo, ndandidiniwe, ndaphelile, kwaye ndithembeke ngokuqinisekileyo ukuba ndifike ekhaya kumbhede wam! Ndayinika konke oko, kwaye ndayikhupha yonke inkohliso evela encwadini, ndazama ukufaka izinto ezininzi ezahlukahlukeneyo njengoko ndingazenza kuloo mbono wokugqibela ukubonisa iintlobo ezahlukeneyo zezicelo kunye nobuchule - senze into eyenziwe, iindleko, iipropthi , iziqwenga ze-silicone, iziqwenga ze-foam, iingcezu zeentloko, iziqwenga zomzimba. Ndandifuna ngokwenene ukubonisa abagwebi into engazange ndiyenze kule ndawo, ngokukodwa u-Glenn, owayenomdla omkhulu wecorny kwi-makeups ...
Ngoko ndandifuna ukwenza into ebalulekileyo kuye, kwaye ngokwenene kubo bonke, ukuba baxelele ukuba andiyiyo ipony. NjengoVe uthi, ukuhleka kweentlanzi kwakumangalisa, kodwa wayefuna ukuba ndiyazi ukuba akusoloko ikulungele yonke imisebenzi yokwenza. Oko kwathi kum, "Ndibonise enye into ..." Ngoko ke kwakuyisikhathi sokubonisa ukuba ndiyakwazi ukwenza izinto ezinxulumeneyo, kwaye ndandiva ngathi senze loo nto ... Saphuma ngokwenene endleleni yokugqiba ibali lokwenene apho nalaba bantu.
Ngelishwa, ekupheleni, abalinganiswa banqatshelwe naluphi na uhlobo olukhethiweyo, kwaye bafakwa kwisiteji ngaphandle komyalelo.
Angela Mitchell: Ngokwenene? Oku kwakufuneka kube nzima.
URJ Haddy: Ewe, i-Phoenix yayifanele ibe phakathi njengendawo ephambili yemfazwe enkulu phakathi kwe-Alchemist / Necromancer embi kunye noMama woMhlaba onobulungisa kunye noMatronly. Umdaniso unokubonakalisa oko, kodwa abazange bathathe nantoni na loo nto. Ndandiphazamiseka gqitha ngaloo nto. Xa bephuma, babemi khona nje ngokuba "baseMelika baseGothic" kwaye abazange bacinge ukuba nawuphi na umlingisi obangelwayo, ungakhankanyeli umzekelo "Umhlaba Wamama" wawunelisekile kakhulu kwindawo yokuqala ukuba zonke izinto zibeke phezu kwakhe, ngoko ke ixesha elijongene naye, likhawuleza ...
Ukujonga emva kweSatifikethi
URJ Haddy kunye neentlobo zakhe ezintathu ze "Face Off" kwixesha lokugqibela lesi-2. Iingxelo zikaHaddy, "Iziqwenga ngeendwangu ezihambayo, iintloko zeentloko kunye neentsiba zibukeka zimangalisekile. Andizange ndibe sisigxina sezinto esizifezile njengeqela." Ngobubele beSyfy neNBCUniversal
Angela Mitchell: Hayi, hayi ...
URJ Haddy: Kwakukho umqobo weelwimi, njengoko wayengathethi isiNgesi esikhulu ... Wayelokhu ethi "Ndingadlala njani kule nto?" Ndiyicinga emva kokusebenza kunye ne-Landon njengendlela yam yokwenza imodeli ininzi yonyaka, ukuba ndibe ncinane. Ubonisa ngokwenene umehluko kwimpepha xa ubeka umntu olungileyo okanye ongalunganga.
Ndandiziqhenkcezile ngamantombazana, nangona-indoda, basebenzela nzima kum, kwaye batyelela izinto ezintle. Siphelile, sasifanelekile, sasiyintle kwaye sinemibala kwaye sifike ngaphandle kwebhokisi kuyo yonke loo nto ndiyenzile ngaloo nyaka - kwaye singathethi, kwinqanaba kunye nasekuhambeni, iziqwenga kunye neendwangu ezihambayo, iintloko zeentloko kunye neentsiba zikhangelekile. Kuzo zintathu, ndivakalelwa ngumoya kunye nomoya, i-ours yayibonakaliswe kakuhle ukusuka kwisigaba. Andizange ndibe sisigxina sezinto esizifezile njengeqela.
U-Angela Mitchell: Ngomngeni wezilwanyana, ukuba ungabuyela emva kwexesha, ngaba uya kukhetha iilwanyana ezahlukeneyo?
URJ Haddy: Andizi ngokunyanisekileyo. Mhlawumbi ndiza kuba, ukuba ndiyazi ukuba siza kwenza iidinosaurs kamva, mhlawumbi ... ndiyithande imbala kwi-Panther Chameleon, ngoko andiyazi ... mhlawumbi ukuba bekuthe ngqo "yenze isilwanyana" ukwakheka, Ndiya kuhamba nengcuka. Kodwa yayingummangaliso onjalo kumngeni - yenza i-plant hybrid plant ... huh?
Ndicinga ukuba senze umsebenzi omkhulu (ekuboneni ukuba yintoni umceli mngcipheko wam, ndiyathetha, ndiyathetha, kunjalo?). Kodwa ngokugqithiseleyo, ndiyithandile imbono ye-Or-KILL-eon, njengoko sayibizayo, ndandiyithanda gqitha indlela uVivica [Fox] ayenayo xa ethetha ngayo - ndoda, ndingathanda ukumbona kuloo nto! Ndiyazi ukuba uya kuyisebenzela loo nto. Ndandiyithanda indlela eyayihamba ngayo ikhangeleka njengesityalo kwaye ijika ibe yi-lizard ... Kodwa abagwebi bathi badibanekile ngeli veki-andiqinisekanga ukuba bafuna ntoni kuloo mngeni. I-rhino, ngoxa ewe isilwanyana esibangelisayo, ngokuqinisekileyo ayiyilo indlela okanye ifomu kwindlela yendabuko (ezininzi iingqondo zabantu) zihle kakhulu. Ehle ngendlela yayo, ewe. Kodwa ndandingacingi ukuba kuya kusebenza.
U-Angela Mitchell: Yiluphi icebiso eluncedo okanye elincomekayo olufumana kubagwebi ngeli xesha? Ndandithanda ukugweba eli xesha, kwaye iVe ibonakala ibonakala kakhulu kwaye ixhasa, ngokukodwa - konke okumangalisa kunikwe iinqununu ezininzi ze-Oscar!
URJ Haddy: Nguye! Kakhulu ... Konke okumangalisa ngakumbi, xa ucinga ukuba uyakhuthazwa kakhulu kuninzi lwethu. Isiphakamiso somtshato wam sinzulu ... Ndandisa kakhulu ngokugqiba nokupenda kwimiqwenga yam embonisweni. Ndiza kuphulaphula Ndithi, "Umsebenzi wakho wepeyinti yiplatile encinane ..." kwaye uzame ukuwubetha ngexesha ngalinye ndilivile kulo mngeni olandelayo.
Iintlobo ze-Makeup ne-Tech Effects
I-Talented "Face Off" egweba ipaneli yayiquka u-Glenn Hetrick (iHeroes, iBuffy i-Vampire Slayer, i-X-Files), i-Award ye-Academy Award Win Veill (iPirates yeCaribbean, u-Edward Scissorhands) kunye noPatrick Tatopoulos (Underworld, Independence Usuku). Ngobubele beSyfy neNBCUniversal
U-Angela Mitchell: I-RJ, nonke nibonakalise ukuba nilungelelanise kwiinkqubo zokukhangela, ukubunjwa kwebunkuni kunye neprothekthi ukuyila kunye nesicelo. Ziziphi i intandokazi?
URJ Haddy: Ndiyathanda ukubetha ngodongwe lwe-WED - Ndiyakuthanda ukwenza izinto, ndiyakuthanda ukusebenza ngezinto ezihlukeneyo ... Ndiyathanda ukukwazi ukuguqula udoti okanye into engabonakaliyo kunye nesebenzayo kwinto efana nesifuba esibambileyo sabadwebi. Ndiyakuthanda i-foam i-latex yezona zinto zininzi, kuba zininzi kakhulu kwaye zilula ukufumana kunye nokusebenza nazo. Ndiyakuthanda ukwenza amapopi.
U-Angela Mitchell: I-Puppetry? Kulungile, kuyinto engummangaliso into enokwenzayo.
URJ Haddy: Ndingumdlali omkhulu nje ngokuba ndiyindalo, kwaye ndicinga ukuba yintoni ke iintliziyo zam iintambo zihanjiswa kwi-puppetry. Ngenxa yokuba kungekhona kuphela uvuyo oluvela ekudalweni kwendalo, kodwa ufika ukuzisa le nopopi, lo mfana omncinci, ebomini. Kuyamangalisa ukuba ubungakanani isandla sinokubeka into engaphiliyo.
U-Angela Mitchell: Yiyiphi inselele owayezidla kakhulu, kwaye kutheni?
URJ Haddy: Isiphelo, njengoko ndithethile ngaphambili. Ngezinto zaseTim Burton ... ngokuqinisekileyo yayiyolonwabo kwaye ikhululekile kakhulu ukuba ndibekho kwimbonakaliso, kodwa ngokuqinisekileyo ndandizange ndicinge into endiyenzayo ngelo xesha yayimangalisa ... Landon yithengise kwaye uyifake phezulu.
U-Angela Mitchell: Ungalokothi ungancinci amandla omzekelo omhle!
URJ Haddy: Kwakhona ... kukho ukubaluleka kokuba nomzimba kunye nobuchule bokwenza ukukhupha abalinganiswa. U-Glenn akazange athi ucinga ukuba ndibe nexesha elide lokucinga ngale nto, kodwa kumbono womdlali, uyacinga ukuba i-Landon yayiyazi iiveki ngaphambi kwexesha ukuze ilungiselele umlingiswa wayo. Wayimangalisa! Asiyi kudala ubugcisa obuxhomekeke eludongeni okanye buhlala kwimeko yeglasi. Senza ubuciko obusebenzayo, ubugcisa obungagqibekanga de bubude kwaye bulethwe ebomini, kwaye ukusebenza ngokubanzi kwaloo nguqu kuxhomekeke ekubeni ngubani ogqokeyo ... Umsebenzi wethu ngowama-50% kuphela - amanye amahlanu ! Kubonakala ngathi yinto enye endiyenzayo ebonakalayo kubalandeli, kwaye ndiyabuxabisa kakhulu ukuba babethanda ukubambisana kwethu!
U-Angela Mitchell: URJ, emva kokufumana indawo yakho kwi-Syfy Viewers Choice Contest ngo-2011 Comic Con e-San Diego, yintoni impendulo evela kwintlalo yabathandi abafana nohambo lwakho "U-Face Off?" Kuye kwenzeke ntoni ukubuyela ekusebenzeni ekwenzeni kunye nemiphumo emva kokuba ufunde umsebenzi ophezulu njengotitshala wesikolo esiphakeme, nangemva kokulahlekelwa kwintsapho yakho? Kumele kube mnandi ngokwenene kwaye ukuqinisekiswa kobomi kuye kwafika kude kumboniso.
URJ Haddy: Njengotitshala, ndabuya evela e-Hollywood kunye nenqununu yam endala yayinomdla ngokwaneleyo ukuba ndivumele ukuloba eli sebe kwinto namhlanje ... kunye neminyaka elishumi kamva sineNkcazo yeSikolo soPhakamileyo seCandelo leFilimu, iThelevishini , kunye ne-Multimedia yobuGcisa bezobuNzululwazi kunye neSayensi-omnye uthetha ngesondo elinobuGcisa beMagnet ukuba iSikolweni esiphakamileyo sihlala kuluntu lwethu. Ndineqhayiya kakhulu ngale mpu melelo, kunye nabo bonke abantwana ababenayo yonke le minyaka.
Ngexesha lakhe kwi-"Face Off", uRJ Haddy uthi: "Ndibuyisele loo nto ukuba ndiyenze into entle kwaye ikhuthaze abantu ebengacinga ukuba ndilahlekile." Ngobubele beSyfy neNBCUniversal
URJ Haddy: Kwiminyaka yakutshanje nangona kunjalo, abantwana baye bashintsha, balawula imimiselo kunye ne-red tape baye baphela ekupheleni, kwaye ukusebenza kwenkqubo yesikolo kawonke-wonke kungeyona into eyasetyenziswa ngayo. 'Akukho Mntwana Oshiya Ngasemva' uye washiya ubuninzi ngakumbi ekuvukeni kwawo, kwaye abantwana bethu batshintshile ngenxa yalo. Andiyi kuguqula le ngqungquthela ye-NEA kodwa ibuhlungu bayo ukubona ukuba yiyiphi imfundo evela ngaphakathi ... kwaye akusiyo iimpazamo zootitshala.
Ndiyazi oku ekugqibeleni ngenxa ye "Face Off." Kwiminyaka yamuva, ndabona ukuba andinako ukuvuselela abantwana bam ngokungakumbi; Andikwazi ukuzifumana ukuba zihambelane nexesha lokugqibela, okanye ziphendulele izinto. Abantwana ngokubanzi abakwenziyo njengoko bebenjalo. Ndandizibuza, "Yintoni endiyenza ngokuhlukile? Ndiyaphi na? Yintoni endiyenzile? "Ukuba ufumana enye okanye ababini abantwana abancinane ngokwenene, unenhlanhla. Kodwa ngaba le ntlupheko ngokubanzi ingxaki yenkcubeko? Ndicinge njalo.
U-Angela Mitchell: Ubaba wayenotitshala, kunye nomnye obalaseleyo-kodwa ndiyazi nokuba ngumsebenzi onzima kangakanani. Kubonakala ngathi amaxesha atshintshile ngokutsha - kubonakala kunzima ukukhuthaza abantu.
URJ Haddy: Emva koko beza "Face Off" kunye ne "Face Off" abalandeli ... kwaye konke ndiyivile kukuthi ndikhuthaze kangakanani, kwaye ndifumene yonke le mbonga ngawo wonke umsebenzi onzima kumboniso, kwaye ngokuthobeka nkolelo. Yonke le thando abantu abavuthayo kum ngenxa yomsebenzi endiwenzileyo kwisithuba se-10 iziqwenga ziziva zingenakuqinisekiswa kodwa zenza ndizive ndiqiniseke kakhulu kwaye ndizodwa.
U-Angela Mitchell: Kuloyiko ukuva.
URJ Haddy: Emva kwakho konke, ungathini uxhalabisayo emhlabeni okanye unemihla embi xa uyayazi ukuba baninzi abantu abahlala ekhoneni lakho kunye nokuqhaqhazela, ukuthumelela ukutshintshela okulungileyo kunye nothando oluvela kuyo yonke indawo?
Kwaye andingathethi ngabantu endinokukhulela nabo, andinakuthetha malunga nosapho, abahlobo okanye abasebenzisana nabo, kuba behlala bebathanda kwaye bexhasa. Ndiyathetha ngabantu abangaziwa ngokupheleleyo. Ndiye ngaphaya kwintsikelelo ngeendlela ezininzi, kwaye ndingenakukuxabisa. Ndiyabuyisela loo mvakalelo yokwenza into entle kwaye ikhuthaze abantu endicinga ukuba ndilahlekile. Ngoku, ngenxa ye "Face Off" ndinikwe isipho esikhulu - ndivumelekile ukukhuthaza abantu kwisikali esibanzi, ukufikelela ngaphaya kweendonga zeklasi elinye. Ngexesha leveki ezili-10, ndafikelela kubantu abangaphezulu kunokuba ndandingayi kuba nayo yonke ixesha lokuphila esetyenziswe kwelinye igumbi lokufundela. Yingakho ndifuna ukuzisa ezinye iisemina, iindibano kunye neendibano zocweyo kunoma ubani oza kuba nam.
5 Iimpawu ze-Makeup Stakes zokugwema
Yiyiphi iBallet yokuqala?
I-Sahul: I-Pleistocene Continent yase-Australia, iTasmania kunye ne-New Guinea
Umthetho 6: Umdlali (iMithetho yeGolf)
Ukutshabalalisa i-Beta Inkcazo
IYunivesithi yaseHartford Admissions
IziKhokelo eziSiseko zeLungelo lezilwanyana
INkomfa ye-Great Midwest Athletic